I-Huawei Mate 30 iya kuziswa ngoSeptemba 19 ngokusemthethweni | I-Androidsis
I-Huawei Mate 30 inokuba sele inawo umhla wokubonisa
I-Huawei Mate 30 iya kuba ziimodeli zokugqibela eziphezulu ukusuka brand Chinese, eza kufika iprosesa entsha. Kucingelwe iiveki ukuba iifowuni ziya kuziswa ngokusesikweni ngoSeptemba. Kukho amarhe malunga nalo mhla wokufayilisha onokwenzeka kwaye ngoku basishiya nentsha, eza nabantu abaliqela.
Ngokusekwe kwezi datha, sinokulindela ukuba ntetho ye-Huawei Mate 30 ibanjwe ngo-Septemba. Ukuba la marhe ayinyani, ngenyanga ngesele siyazi le nto isiphelo esitsha sophawu lwaseTshayina, oluthembisa ukuba lolunye lwezona ndawo zidumileyo zeenyanga ezidlulileyo zonyaka.
Ukusukela ngokwale datha, Iya kuba ngoSeptemba 19 xa iHuawei Mate 30 thaca ngokusemthethweni. Kwezi veki bekukho amarhe akhomba kwinkcazo-ntetho phakathi enyangeni, ke oku kuvuza kutsha kubonakala kungqinelana noku. Iimodeli ezintathu ziya kuba zezizo zifikayo: eqhelekileyo, uguqulelo lwePro kunye nemodeli yeLite.
Oku kunokuthetha ukuba ezi fowuni iya kuthengiswa ngasekupheleni kukaSeptemba okanye ekuqaleni kuka-Okthobha. Kuba zihlala zisungulwa ezivenkileni iiveki ezimbalwa emva kwengcaciso yazo. Kodwa kuqala kufuneka silinde lo mhla wokungeniswa ukuze uqinisekiswe.
I-Huawei Mate 30 ifika kumzuzu obuthathaka kumenzi waseTshayina, oqhubeka nokufumana iziphumo, ngakumbi ukungaqiniseki, yeengxaki phakathi kwe China ne United States. Okwangoku ndifumene isivumelwano seentsuku ezingama-90 ngaphezulu, ekufuneka ngokuqinisekileyo ikunike uxolo lwengqondo.
Siya kunika ingqalelo idatha entsha ifika kwezi Huawei Mate 30. Uluhlu olubalulekileyo lomenzi waseTshayina, njengoko ziye zaba yenye yezona zinto zithengiswa kakhulu kwindawo ephezulu. Ukongeza, ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka bayavuna ukuthengisa kakuhle nosapho lwe-P30, eqhuba kakuhle kwimarike.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Huawei Mate 30 inokuba sele inawo umhla wokubonisa
Inqaku leRedmi 7 lidlula iiyunithi ezingama-20 ezigidi zithengisiwe
Inqaku leRedmi 8 Pro yenze ukubonakala ngekhamera yangemva yesine